တရုတ် အရည်အသွေးမြင့် တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အလှည့်ကျ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် ထုတ်လုပ်သူ - AMIDI
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > တိကျသောမှိုအစိတ်အပိုင်းများ > CNC Turning Milling Compound Processing ၊
တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လှည့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နှစ်အတော်ကြာ CNC တိကျမှုရှိသော စက်ကိရိယာနယ်ပယ်ကို အာရုံစိုက်ထားပြီး၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊ စမ်းသပ်ကိရိယာများ ပြီးမြောက်သည်၊ ကုမ္ပဏီတွင် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကြိတ်စက်အသစ်၊ လမ်းလျှောက်ဝိုင်ယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုးလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ 2.5 D ရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူ၊ သုံးယွမ်၊ ပရိုဂျက်တာများနှင့် အခြားဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုများ ရှိသည်။ နှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများ၊ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် တိကျမှုတို့မှ ထုတ်ကုန်များသည် အလွန်မြင့်မားပြီး အဆင့်မြင့်ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ 3C၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်၊ မော်တော်ကား၊ ရုံးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်သော ထုတ်ကုန်များ။ မြေပုံ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ အောက်ပါတို့သည် Precision Medical Accessories Turning Processing အတွက် နိဒါန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊ ၎င်းကို သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်နိုင်စေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
1. ထုတ်ကုန်လှည့်ပတ်မှု တိကျသေချာသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မိတ်ဆက်ခြင်း။
တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လှည့်ပတ်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်း။
2. ထုတ်ကုန်အသွင်အပြင်နှင့် တိကျမှန်ကန်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အလှည့်ကျလုပ်ဆောင်ခြင်း။
ရုပ်ပုံထုတ်ကုန်များ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကိုးအကားအတွက်သာ၊ အမှန်တကယ် စိတ်ကြိုက်ပုံဆွဲခြင်းသည် သာလွန်လိမ့်မည်။
3. အလှည့်ကျလုပ်ဆောင်နေသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ဖောက်သည် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း ဘာသာရပ်။
4. အလှည့်ကျလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ တိကျမှန်ကန်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
ပို့ဆောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် သုံးစွဲသူများ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များအတိုင်း သဘောတူလက်ခံသည်!
အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏အတိုင်းအတာသည်းခံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ပေးပါမည်။
2: နမူနာပေးပါသလား။ အခမဲ့ သို့မဟုတ် အခကြေးငွေ ?
အဖြေ: ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရ နမူနာများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
3: သင့် MOQ ကဘာလဲ။
အဖြေ- အနည်းဆုံး မှာယူမှု မရှိပါ။
4- သင်သည် ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူလား။
အဖြေ- ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်ကို ကြည့်ရှုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
5: မင်းရဲ့ပေးပို့ချိန်က ဘယ်လောက်ကြာလဲ။
အဖြေ- ပေးပို့သည့်အချိန်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်အချက်များစွာရှိသည်၊ ဤလိုအပ်ချက်သည် ကုန်ပစ္စည်းအတိုင်းအတာတိကျမှု၊ တည်ဆောက်ပုံရှုပ်ထွေးမှုနှင့် မှာယူမှုအရေအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သည်
6: သင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာရှိလျှင် သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။
အဖြေ- ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်ကုန်များ၏ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ကုန်ချောထုတ်ကုန်များ၏ ထောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းကို အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ယုံကြည်ပါ။ ချို့ယွင်းနေသော ထုတ်ကုန်များကို မဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်း ချို့ယွင်းနေသော ထုတ်ကုန်များ၏ စီးဆင်းမှုကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
7- သင်သည် ကျွန်ုပ်အား တိကျသော ကိုးကားချက်တစ်ခုပေးနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်အား မည်သည့်အချက်အလက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်သနည်း။
အဖြေ- စံစက်သုံးမြင်ကွင်း၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၊ နှင့် ထင်ရှားစွာ မှတ်သားထားသောအတိုင်းအတာသည်းခံမှုနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်သည်းခံမှုလိုအပ်ချက်များ လိုအပ်ပါသည်။
hot Tags:: တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လှည့်ပတ်ခြင်း စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝယ်ရန်၊ စိတ်ကြိုက်၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စျေးသက်သာသော၊ စျေးနှုန်းသက်သာသော၊ ကိုးကားချက်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်
Milling Complex Precision Machining
Turning Shaft Processing